Guddiga IEBC oo ka hadlay saxiixyada shacabka ee dhawaan la uruurin doono – Radio Damal
Guddiga IEBC oo ka hadlay saxiixyada shacabka ee dhawaan la uruurin doono
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada ee IEBC ayaa oggolaaday qaabka la doonayo in loo soo uruuriyo saxiixyada dadweynaha taageersan warbixinta guddiga mideynta iyo dib u heshiisiinta ee BBI.
Guddoomiyaha IEBC Wafula Chebukati ayaa xilli uu ka jawaabayay codsi uga yimid xoghaynta qaran ee BBI sheegay inay lagama maarmaan tahay in la soo dhameystiro macluumaadka shakhsiyaadka la dhacsan isbeddellada la soo jeediyay.
Isbeddelladan oo siyaabo kala duwan looga falceliyay waxaa ka mid ah in wadanka uu yeesho ra’iisul wasaare iyo labadiisa ku xigeen.
Sidoo kale in la soo doorto 70 xildhibaan oo dheeraad ah sidoo kalena in meesha laga saaro xilalka wakiillada haweenka ee ismaamullada.
Warbixinta BBI waxaa sidoo kale ku xusan in miisaaniyadda dhaqaale ee ay dowladda dhexe ku wareejiso ismaamullada oo hadda ah boqolkiiba 15 in la kordhiyo ilaa boqolkiiba 35.
BBI ayaa sidoo kale ku talinaysa in ardayda dhameeya jaamacadaha iyagoo lagu leeyahay amaahda guddiga HELB in aan laga dalban Karin inay deynta gudaan ilaa iyo inta ay shaqo ka helayaan.
Sidoo kale dhallinyarada ganacsatada ah in canshuur laga cafinaya muddo toddobo sano.
Guddiga BBI ayaa soo jeediyay in aqalka sare uu ka koobnaado 97 xubnood oo isugu jiro rag iyo haween matalaya ismaamullada wadanka.
Maanta ayaa la filayaa in madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta iyo madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ay si rasmi ah u daahfuraan qorshaha uruurinta saxiixyada Kenyaanka doonaya in wax laga beddelo dastuurka wadanka.
Barnaamijkan ayaa lagu waday in la billaabo isbuucii hore balse dib ayuu u dhacay maadaama aan xilligaas la soo saarin hidise sharciyeedka sharci beddelka.
Xoghaynta qaran ee BBI ayaa sheegtay in hadda ay diyaar u tahay uruurinta saxiixyada shacabka.
Dennis Waweru oo ka tirsan xoghaynta ayaa xusay in howshan oo laga fulinaya guud ahaan dalka ay muddo hal toddobaad ah qaadan doonto.
Waxaa uu hoosta ka xarriiqay inay shaqeyn doonaan iyadoo si buuxda loo raacaya amarrada iyo talooyinka caafimaad ee lagu xakameynaya faafidda cudurka COVID-19
Tani ayaa imaanaysa iyadoo kooxo iyo ururro kala duwan sida golaha sare ee muslimiinta dalka ee SUPKEM, naafada, haweenka iyo madaxda kaniisadaha ay dalbadeen in wax laga beddelo qodobbada warbixinta BBI.